43 voan’ny Coronavirus Miharatsy ny toe-draharaha, hitombo ny fepetra…
Coronavirus Mitombo isa ireo marary any amin’ny Faritany
Olona iray teto amin’ny faritra Analamanga no namoy ny ainy araka ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta, ka 54 ny maty hatreto. 378
4 indray no maty Faritra 19 amin’ny 22 no efa misy Covid 19
Olona 4 indray no namoy ny ainy vokatry ny coronavirus teto Madagasikara, ka ny iray tany Ambanja, ary 3 notsaboina teny Befelatanana teto Antananaivivo.
CSB II eto Antananarivo Mbola tsy tonga ny fitaovana sy fanafody…
Nanomboka ny alatsinainy teo no efa maro ireo olona tonga eny amin’ireny CSB II ireny ho an’ny eto Antananarivo sy ny manodidina manantona hanao fitiliana sy hanao fizahana ara-pahasalamana.
Tahotry ny Covid 19 Maro ireo afaka sigara sy toaka
Tsy misangy ny Covid 19. Olona 41 isa no efa namoy ny ainy teto amintsika hatramin’ny omaly ary tsy mitsaha-mitombo ireo olona marary.
Antananarivo Mitombo ny isan’ny maty
Nahatatra 20 ireo razana teto amin’ny farita Analamanga nahazo fahazoan-dàlana halevina teny Anjanahary tao anatin’ny herinandro, raha ny tatitry ny BMH.
Paul Rabary « Marenina tanteraka ny ila-sofiko »
Midera sy mankalaza an’Andriamanitra lehibe indrindra mandahatra izao rehetra izao raha mbola afaka manoratra aminareo aho anio, hoy ny minisitry ny fanabeazam-pirenena teo aloha,
Alaotra Mangoro “Vonjena zaraina CVO ireo toerana mbola misy tranga”
Mirafitra amin’ny hoe Alaotra sy Mangoro ny faritra Alaotra mangoro, hoy ny governora ao an-toerana, ny Dr Richard Ramandehamanana. Efa nisy ny ezaka natao tao Mangoro ary manana ny atao hoe
Ny sabotsy teo dia nilaza ny Filoham-pirenena fa misy tranga 11 vaovao, ary omaly dia nisy olona 6 vaovao indray ihany koa voaporofo fa mitondra ny
otrik’aretina, ka lasa 43 izany no voa hatramin’ny alahady 29 martsa tamin’ny 12 ora atoandro. Tsy mbola fantatra ny momba ireo 6 farany. Tsy nisy soritr’aretina kosa izy ireo. Amin’ireo 43 dia tsy misy soritr’aretina ny 33; Ny 10 no misy ary ny 7 dia soritr’aretina tsy dia atahorana: koha-maina, marary, manakotsako,… ireo 3 kosa dia sempotra sy sarotsarotra, fa efa mahazo fanafody avokoa izy ireo, hoy ny fanazavan’ny mpitondra tenin’ny CCO COvid-19 Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle. Ny atoandro sy ny hariva ny Institut Pasteur de Madagascar na ny IPM no manome valin’ny fitiliana ataony. Ny tranga vaovao 11 tamin’ny asabotsy teo no betsaka indrindra hatramin’ny nanaovana fitiliana, araka ny fanambaran’ny Filoham-pirenena. Ny tombony ho antsika, dia fantatra ireo mpandeha avy any ivelany mety hitondra ny covid 19, fa tsy tahaka ny any ivelany. Ny natao fitiliana, dia ireo tsy ahitana soritr’aretina. Olona salama daholo ireo efa notiliana mba hisorohana azy, fa ny any ivelany efa marary vao tonga any amin’ny hopitaly. Ny mampanahy dia ny “cas contact” izay olona monina sy nipetraka teto Madagasikara no voa. Raha nijanona teo amin’ireo avy any ivelany, dia afaka nanome toky 100% ny vahoaka aho hoe voafehintsika tanteraka io, hoy i Andry Rajoelina toa somary kivikivy. Io no manahirana ka tsy maintsy hitombo kokoa ny fepetra, raha ny fanambarana.
Mpizahatany marary efa nitety toerana maro
Talohan’ny nanatsaharana ny sidina dia nisy mpizaha tany tonga, ary namindra tamin’ny olona nifanerasera taminy. Nifindrany ny mpamily, ny mpisera-dia,…. Tonga teto ny zoma 13 martsa, ary nody haingana tamin’ny 19 martsa io vazahan io. Izany hoe talohan’io dia efa narary. Nipetraka tao amin’ny Hotely Les Trois Métis teo Antaninandro. Nandeha tany Behenjy nisakafo tao amin’ny Le Coin du Fois Gras izay raha ny fanazavan’ity toeram-pisakafoanana ity tao amin’ny tambajotran-tserasera dia vazaha nanao andiany fa tsy hoe iray. Tany Antsirabe tao amin’ny Hotel Palm, Royal Palace, Tsenan’i Sabotsy,… Rendez-vous des chasseurs Ambatolampy, Betafo, Air France Zone Zital Ankorondrano, Restaurant Combava Route Digue, tany amin’ny Vakôna Lodge Andasibe, Hotel Chez Luc Andasibe, Restaurant diamant Moramanga,…Nandalo tany Ambatomanga, Gallery Lisy Antanimora, La Haute Ville Antananarivo,…. Tsy maintsy hojerena avokoa ireo toerana ireo. Ny zava-misy, dia vokatry ny fifampikasohana. Mila mitombo ny fepetra rehetra, ary tsy maintsy jerena ny nifampikasoka tamin’ilay vazaha efa any an-dafy, izay efa marary mafy amin’izao. Hananosarotra kely ny hijerena an’izay kanefa tsy maintsy hataontsika, hoy ny Filoha. Ny faharoa, dia nisy tokantrano nampiantrano mpifankatia teratany vahiny sy Malagasy, ary efa narary vao nankany amin’ny toeram-pitsaboana.
HITOMBO NY FEPETRA HORAISINA…
Mihasarotra ny toe-draharaha raha dinihina amin’ny zava-misy satria any Toamasina dia olona 80 no atao fitiliana, any Vakinanka¬ratra olona 28 araha-maso akaiky. Mila miomana isika amin’ny herinandro, hoy ny Filoha. Ilay “cas contact” io no tena loza. Raha niala io vazaha ion y 19 martsa dia hatramin’ny androany nahitana ireo “cas contact” ireo. Mety efa namindra ireo olona roa voa. Tokony tsy hivoaka ny trano ny ankamaroan’ny olona. Izay mihitsy no nanononako ireo toerana. Tena loza, ary ny olantsika dia efa narary ireo olona ireo vao nanantona ny toeram-pitsaboana. Izany no miseho any Italie, Frantsa izay tsy fantatra mihitsy ilay aretina hoe taiza avy fa efa marary vao mitombo mitombo hatrany. Karohina avokoa ny làlana nalehany, hoy I Andry Rajoelina. Manoloana ny zava-misy sy ny fivoaran’ny toe-draharaha no hakana ny fepetra. Mety hitombo ny fepetra, ary misy ny soso-kevitra samihafa, toy ny fandrosoana ny fikatonan’ny tsena amin’ny 10 ora maraina. Miankina amin’ny toe-draharaha ny fanapahan-kevitra horaisina, hiarahana amin’ny Governemanta manontolo, ny fahasalamana, ny mpitandro filaminana,… Mifampidinika andro aman’alina hijerena ny fepetra horaisina. Mbola eo amin’ny “stade 1” isika ary mbola tsy mihoatra ny 200 ny voa, mbola tsy mihoatra ny 50 ny olona maty, ka isian’ny fihibohana manokana. Manomboka tamin’ity “cas contact” ity kosa dia hampiova ny fanapahan-kevitra tsy maintsy raisina, izay mbola hodinihina. Olona iray tokony hiantsena ihany no miantsena fa tsy ny rehetra. Aleo misoroka toy izay mitsabo, fa iray ihany ny fanafody hatreto dia ny tsy fivoahana ny trano. Raha tsy mahay mifehy tena isika, dia ho sarotra io, hoy ny filoham-pirenena. Tombanan’ny maro fa hohalavaina ny fepetra tsy fahafahana mivoaka ny trano.